02/07/2022 - 16:59:08 Wararka Gudaha MeMO Staff
Wararka laga helayo magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa sheegay in shil khasaara dhaliyay uu markale ka dhacay gudaha nagaaladaasi.
02/07/2022 - 12:50:25 Wararka Gudaha MeMO Staff
Mas'uulka ugu sarreeya Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan dagaalkii Jihaadka ahaa ee wadanka ka socday 21-kii sano ee lasoo dhaafay.
02/07/2022 - 12:38:38 Wararka Gudaha MeMO Staff
Dowladda Kenya ayaa ugu bishaaraysay beeralayda Khaatka wadankeeda in isbuucan gudihiisa ay lacago malaayiin dollar ah kasoo xarayn doonaan Soomaaliya.
02/07/2022 - 12:22:46 Wararka Gudaha MeMO Staff
Markii ugu horraysay dowladda Federaalka ayaa sheegtay in ay dhinteen qaar katirsan maleeshiyaadkii Soomaalida ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea.
02/07/2022 - 08:12:01 Wararka Gudaha MeMO Staff
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan gobollada Sh/dhexe iyo Sh/hoose.
01/07/2022 - 12:25:24 Wararka Gudaha 21378 Super Admin
Xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho oo ay gacanta ku hayaan ciidamo shisheeye ayaa xalay laga xusay munaasabadda 1-da luuliyo, iyadoo uu madaxweyne Xasan Sheekh khudbadiisa ku sheegay in dalku xor yahay oo Soomaaliya meel wanaagsan mareyso.
Wax ka ogoow Qiimaha Xajka looga aado ku dhowaad 20 dal oo Carbeed!.
30/06/2022 - 17:42:11 Wararka Gudaha MeMO Staff
Sida go'aansan, waxaa la filayaa in acmaasha Xajka ay billowdaan 7 July ayna socdaan illaa 12-ka bisha, martida Raxmaanka ee sanadkan tagaya Xajka ayaana lagu wadaa iney booqdaan amaakinta muqadaska ah ee kamid ah Xarameynka, kagadaal labo sano oo xiriir ah oo ay arimahaasi go'een sababo ku…
30/06/2022 - 17:30:36 Wararka Gudaha MeMO Staff
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku warramaya in maleeshiyaadka DF ay maata barqadii togteen mid kamid ah shaqaalaha dawlada oo ka shaqaynayay qeybta Minishiibiyada.
30/06/2022 - 16:15:56 Wararka Gudaha Super Admin
Asalaamu Calaykum Waraaxmatullaahi Wabarakaatuhu Fadliga 10ka Dilxijjah oo bilaabatay maalintii Khamiis oo ku beegneed 30 June,2022
30/06/2022 - 12:41:17 Wararka Gudaha MeMO Staff
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhacay weeraro isugu jira madaafiic iyo dagaalo toos ah oo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka DF .
30/06/2022 - 12:12:34 Wararka Gudaha MeMO Staff
Wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Suudaan ayaa sheegaya in markale ay halkaas ka aloosmeen xiisado colaadeed saacado kadib markii guuldarro dhabarka loo saariyay ciidanka Xabashida.
30/06/2022 - 12:09:24 Wararka Gudaha MeMO Staff
Kadib maalmo aan muuqiisa iyo maqalkiisa midna laheyn ayuu ugu dambeyn warbaahinta kasoo hormuuqday Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda Federaalka.
30/06/2022 - 11:24:41 Wararka Gudaha MeMO Staff
Xoogag jihaadi ah ayaa markale weerar culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka isku magacaabay Puntland.
29/06/2022 - 13:22:45 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Maamulka Cabdifataax Al-Siisi ee dalka Masar ayaa xukun dil ah ku riday 10 ruux, kuwaas oo lagu soo eedeeyay inay kamid ahaayeen ururro ay ugu yeereen kuwa Argagixiso ah, xilli dhibaatooyin adag laga soo warinayo xasbiyada uu gacanta ku hayo maamulkaan.
29/06/2022 - 12:39:01 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dab xooggan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa xallay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaal magaalada Boosaaso dhanka aaga lagu magacaabo Baalade ,dabkan ayaa ka dhashay koronto iyadoo lagu jiro xilliga xagaaga ah,taasna ay sii xoojisay in dadka goobta ay taag u waayaan daminta dabka.
29/06/2022 - 08:48:26 Wararka Gudaha MeMO Staff
Hubanti la'aan ayaa ka taagan xaaladda caafimaad ee uu ku suganyahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha DF-ka.
29/06/2022 - 08:42:14 Wararka Gudaha MeMO Staff
Kadib weerar cir iyo dhul ah oo ciidamada Suudaan ay ku qaadeen deegaannada dhaca xuduudda Itoobiya ayay khasaara lixaad leh ku gaarsiiyeen ciidamada Xabashida Itoobiya.
28/06/2022 - 16:48:48 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Marba marka xigta waxaa soo baxa warar tilmaamaya in weerar sawaariikh loo adeegsaday ama noocyo kale lagu qaaday saldhiga ciidamada Maraykanka ee At-Tanaf, kaasoo ku yaala koonfurta dalka Suuriya.
28/06/2022 - 16:44:26 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Waxay u dhowdahay in dahabka Ruushka uu noqdo mid dhibane u ah cunaqabateynnada ay reer galbeedku kusoo rogayaan dowladda Ruushka, wixii ka dambeeyay markii dowladan ay duulaan toos ah ku qaaday Ukraine, dhamaadkii bishii Febraayo ee horaantii sanadkan.
Ciidamada shisheeye oo lagu weeraray Baraawe iyo Hoosingoow.
28/06/2022 - 16:29:02 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay gobollada dalka ka kala dhacay weeraro isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo dhaxmaray jihaadiyiinta Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka DFS .